OMG ! What is This , ‘माग्नेबुढा’लाई तीन पटक सम्म प्रियंकाको किस् ??? (भिडियो सहित) « Mazzako Online
OMG ! What is This , ‘माग्नेबुढा’लाई तीन पटक सम्म प्रियंकाको किस् ??? (भिडियो सहित)
मज्जाको अनलाईन, भदौ ३० गते बुधबार, २०७२, काठमाण्डौं ।
‘एक अर्कासँग निक नजिक रहेछन् माग्ने र प्रियंका, नत्र हेरौं त कुनै संकोचै बिना अंगालै हालेर बसेका छन्’, भीडमा यि र यस्तै आशयका कुराहरु सुनिन्थ्यो । कोही कोही भन्दै थिए, ‘आज माग्नेलाई घरमा उनकी घरमा छिर्न नदिने भईन् ‘ ।
लाग्थ्यो ‘माग्ने बुढा’ र नायिका प्रियंकालाई यस्ता कुराको कनै प्रवाह नै छैन, उनीहरु मधमस्त मायालु युगल जोडी नै हुन् । सोमबार बेलुकीपख बल्खु चोकमा चलचित्र ‘वडा नम्बर ६’ को प्रोमोशनल ‘स्ट्रिट कन्सर्ट’मा देखिएको दृश्य हो यो ।
नायिका प्रियंका कार्कीले चलचित्र ‘वडा नम्बर ६’ का अन्य हिरोलाई होईन ‘माग्ने’लाई नै रोज्नुको कारण के हो त्यो त उनैलाई थाहा होला । सायद चलचित्र चलाउने फण्डा या अन्य केही पनि हुन सक्छ ।
प्रियंकाले ‘माग्ने’लाई एक पटक मात्र होईन तीन तीन पटक सम्म चुम्बन गरिन्, त्यो पनि हजारौ दर्शकका अगाडी हातमा होईन सिधै गालामा। ‘माग्ने बुढा’ र प्रियंकाको के साच्चै ‘वडा नम्बर ६’ पछि रिलेसन्मा छन् त ? पत्ता लगाउने जिम्मा तपाईहरुलाई । सजिलोका लागि तल भिडियोहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।
माग्ने बुढालाई नायिका प्रियंकाले कसरी किस् गरिन् ? भिडियो हेर्नुस् ।